Kudzokororazve kwehuswa zvasara marara
Mumakore achangopfuura, nekuvandudzwa kwetekinoroji yekurima yefungi inodyiwa, kuwedzera kuri kuwedzera kwenzvimbo yekudyara uye kuwanda kwenzvimbo dzekudyara, howa hwave chinhu chakakosha chemari mukugadzirwa kwekurima. Munzvimbo yekukura howa, marara mazhinji anogadzirwa gore rega rega. Maitiro ekugadzira anoratidza kuti 100kg yezvinhu zvekuberekesa inogona kukohwa 100kg yemahowa matsva uye iwane 60kg yetsvina yemoshwa panguva imwe. Iyo tsvina haina kungosvibisa nharaunda chete, asi zvakare inokonzeresa huwandu hwakawanda hwekuparadza zviwanikwa. Asi kushandisa howa masarasara marara kugadzira bio-organic fetiraiza inozivikanwa, iyo isingangoone chete kushandiswa kwemarara, asi zvakare inovandudza ivhu nekuisahowa zvakasara bio-organic fetiraiza.
Masara ehowa ane hupfumi muzvinhu zvinovaka muviri zvinodikanwa pakuva nembeu uye kukura kwemiriwo nemichero. Mushure mekuvira, anogadzirwa kuita bio-organic manyowa, ayo ane mhedzisiro pane kudyara. Saka, masara howa anoshandura sei marara kuita pfuma?
Uchishandisa howa masara ekuvirisa kuita bio-organic fetiraiza nzira nhanho:
1. Dosage ratio: 1kg ye microbial mumiririri inogona kuvirisa 200kg yemosara howa. Iyo tsvina howa masara inofanirwa kupwanywa kutanga yozoviriswa. Diluted microbial agents uye mushroom masara akasanganiswa zvakanaka uye akarongedzwa. Kuti uwane chiyero chakakodzera cheC / N, imwe urea, mupfudze wehuku, masara esame kana zvimwe zvekubatsira zvinogona kuwedzerwa nenzira kwayo.
2. Kudzora hunyoro: mushure mekusanganisa howa masara uye zvekubatsira zvakaenzana, pfapfaidza mvura kune iyo stack yemidziyo zvakaenzana nepombi yemvura uye ishandure nguva dzose kusvikira hunyoro hweiyo mbishi inenge 50%. Unyoro hwakadzika hunodzora kunonoka, hunyoro hwakanyanya hunotungamira kune yakashata aeration yeiyo stack.
3. Kompositi kutendeuka: kutenderedza sitaki nguva dzose. Microorganism inogona chinyararire kuwanda uye kudzikisira iyo organic chinhu pasi pemamiriro akakodzera emvura uye okisijeni zvemukati, nekudaro ichigadzira yakakwira tembiricha, ichiuraya hutachiona hwehutachiona uye mbeu yemasora, uye ichiita iyo organic chinhu kusvika yakagadzikana mamiriro.
4.Tembiricha kudzora: iyo yakanakisa yekutanga tembiricha yekuvirisa iri pamusoro pe15 ℃, iko kuvirisa kunogona kuve ingangoita svondo rimwe chete. Munguva yechando tembiricha yakadzika uye iyo nguva yekuvira iri yakareba.
5. Fermentation kupera: tarisa iwo ruvara rwehowa dreg stack, iri yakajeka yero isati yavira, uye nerima bhuru mushure mekuvira, uye iyo stack ine nyowani howa hunonaka pamberi pekuvira. Electrical conductivity (EC) inogona zvakare kushandiswa kutonga, kazhinji EC yakaderera pamberi pekuvirisa, uye zvishoma nezvishoma yakawedzera panguva yenzira yekuvirisa.
Shandisa iyo howa masara mushure mekuvirisa kuyedza Chinese kabichi inomera nzvimbo, mhedzisiro yakaratidza kuti organic fetiraiza yakaitwa yehowa masara inobatsira kugadzirisa Chinese kabichi kabichi hunhu, senge Chinese kabichi shizha, petiole kureba uye shizha upamhi zvakakwirira pane zvakajairwa, uye chiChinese kabichi chibereko chinowedzera 11.2%, zvirimo chlorophyll zvakawedzera ne9.3%, shuga inogadzikana yakawedzera ne3.9%, hutano hwemuviri hwakavandudzwa.
Ndezvipi zvinhu zvinofanirwa kutariswa usati wamisa bio-organic fetiraiza chirimwa?
Kuvaka bio-organic fetiraiza chirimwa inoda kuongororwa kwakazara kwe zviwanikwa zvemuno, kugona kwemusika uye nharaunda yekuvhara, uye goho regore rinowanzo kubva pamakumi mana kusvika mazana matatu ematani. Zvinoburitswa pagore zvematani zviuru gumi kusvika makumi mana emazana zvakakodzerana nemiti midiki mitsva, zviuru makumi mashanu kusvika makumi masere ematani emiti yepakati uye 90,000 kusvika 150,000 matani ezvirimwa zvikuru. Iwo anotevera misimboti inofanirwa kuteedzerwa: zviwanikwa zviwanikwa, ivhu mamiriro, zvirimwa zvikuru, chimiro chemiti, mamiriro enzvimbo,
Ko zvakadiniko nemutengo wekumisikidza bio-organic fetiraiza chirimwa?
Mudiki mwero wekugadzira fetereza mutsara investa idiki, nekuti mutengi wega wega mbishi zvinhu uye izvo chaizvo zvinodiwa zvekugadzira maitiro nemidziyo zvakasiyana, saka mutengo wakatarwa hauzopiwi pano.
Yakazara howa zvakasara bio-organic fetiraiza yekugadzira mutsara inowanzo kuverengerwa nhevedzano yekugadzirwa kwemaitiro uye akasiyana ekugadzirisa michina, iyo yakatarwa mutengo kana zvinoenderana nemamiriro ezvinhu chaiwo, uye mashandisirwo emitengo yepasi, mutengo wekuvaka wekishopu uye kutengesa uye manejimendi mitengo inodawo kutarisirwa panguva imwe chete. . Chero bedzi maitiro nemidziyo zvakanyatsoenderana uye kusarudzwa kwevanopa zvakanaka kuchisarudzwa, hwaro hwakasimba hwakaiswa hwekuwedzera kuburitsa uye purofiti.